Rex Tillerson oo kulan la qaatay wasiirada arrimaha dibada iyo dalxiiska ee dalka – The Voice of Northeastern Kenya
Rex Tillerson oo kulan la qaatay wasiirada arrimaha dibada iyo dalxiiska ee dalka
Xoghayaha arrimaha dibada ee Maraykanka Rex Tillerson oo booqasho ku yimid dalka jimcihii la soo dhaafay ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaradda arrimaha dibada iyo xariirka caalamiga ee dalka Monica Juma iyo dhiggeeda dalxiiska Najib Balala.
Kulankan oo yimid kadib midkii jimcihii dhex maray Tillerson iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa xooga lagu saaray sara u qaadida xariirka ay leeyihiin wadamada Kenya iyo Maraykanka.
Bayaan ka soo baxay wasaradda arrimaha dibada ee Kenya ayaa lagu sheegay inuu Maraykanka kala dhexeynaya iskaashi hoose oo taabanaya dhinacyo badan.
Juma iyo Tillerson ayaa isla soo hadal qaaday sida loo sii xoojin karo cilaqaadka dhanka ganacsiga iyo maalgashiga ah , amniga, wax soo saarka, teknolojiyada, hormarinta dhalinyarada, tageerida ciidamada AMISOM iyo ka shaqeynta geedisocodka nabadeed ee sudaanta koonfureed.
Rex Tillerson ayaa markii dambe booqday xarunta ugu weyn ee waaxda duur joogta halkaasi oo uu kulan kula qaatay wasiirka dalxiiska Najib Balala in kastoo faahfaahin dheeraad ah aanan laga helin waxyaabihii ay ka wada hadleen.
← DHAGEYSO warka subaxnimo ee star fm
Madaxweynaha Ruushka oo bixiyay amar 2014-kii lagu soo ridi lahaa diyaarad laga leeyahay Turkiga →